वि. सं. २०७८ जेठ ३० गते, आइतवारको राशिफल - Enepalese.com
वि. सं. २०७८ जेठ ३० गते, आइतवारको राशिफल
इनेप्लिज २०७८ जेठ ३० गते १०:४५ मा प्रकाशित
तपाईंको सहारामा धेरैले निर्भर गर्नेछन् र तपाईंलाई निर्णय लिनको लागि मनको स्पष्टता महत्त्वपूर्ण हुनेछ। तपाईंले प्रेम गर्नेहरूलाई उपहार दिने र उनीहरूबाट प्राप्त गर्ने शुभ दिन। विवाहको प्रस्ताव हुनाले तपाईंको प्रेमी जीवन जीवनको लामो बन्धनमा परिणत हुन सक्छ। आज भन्दा अघि विवाह कहिल्यै यति सुन्दर भएको थिएन।
पुरानो मित्रसँग पुनर्मिलन भएकोले तपाईंको आत्मालाई उज्यालो पार्नेछ। ढिलो भएका भुक्तानी प्राप्त भएकोले पैसाको समस्यामा सुधार भएको छ। तपाईंको आकर्षण र व्यक्तित्वले केही नयाँ मित्र बनाउन मद्दत गर्नेछ। विवाहको प्रस्ताव हुनाले तपाईंको प्रेमी जीवन जीवनको लामो बन्धनमा परिणत हुन सक्छ। तपाईंले आज आफ्नो विवाह यति सुन्दर कहिल्यै भएको थिएन भन्ने महसुस गर्नु हुनेछ।
तपाईं दीर्घ रोगबाट छुटकारा पाउन सक्नुहुन्छ। मित्रहरू र अपरिचितहरूसँग समान रूपमा होसियार हुनुहोस्। आफ्नी प्रेमिकाको लागि छाडा नहुनुहोस्। अरूलाई मद्दत गर्न आफ्नो समय र ऊर्जा समर्पण गर्नुहोस् – तर तपाईंको चासो नहुने विषयहरूमा संलग्न नहुनुहोस्। ठूलो खर्चको कारण आफ्नो जोडीसँग तपाईँको झगडा हुन सक्छ।
रचनात्मक सोखले तपाईंलाई तनाउमुक्त राख्नेछ। भाइ वा बहिनीले तपाईंको सल्लाह लिन सक्छन्। तपाईंका प्रियले प्रतिबद्धता खोज्नेछन् – पुर्याउन नसक्ने प्रतिज्ञा नगर्नुहोस्। यो दिन तपाईंका जीवनको वसन्त जस्तै छ; रोमान्सले पूर्ण, तपाईं र तपाईंको जीवनसाथी।
आराम महत्त्वपूर्ण भएको दिन – हालैमा तपाईंले धेरै मानसिक दबाबको सामना गर्नुभएको छ – त्यसैले मनोरञ्जन र आमोद-प्रमोदले तपाईंलाई आराम गर्न मद्दत गर्नेछ। कसैका लागि – परिवारमा नयाँ सदस्यको आगमनले उत्सव र पार्टी ल्याउँछ। कसै कसैको लागि सुन्दर उपहार र फूलले भरिएको रोमान्टिक साँझ। विवाह यौनको लागि मात्रै हो भनेर भन्नेहरूले ढाँट्छन्। किनभने, आज तपाईंलाई साँचो प्रेम के हो भन्ने थाहा हुनेछ।
मित्रहरूले तपाईंलाई कोही विशेष व्यक्तिसँग परिचय गराउनेछन् जसले तपाईंको विचारमा केही उल्लेखनीय प्रभाव पार्न सक्छ। तपाईंको हँसिलो प्रकृतिले वरिपरिको वातावरण उज्यालो पार्नेछ। तपाईं आफ्नो कल गर्ने देरी गरेर आफ्नो प्रेमी साथीलाई जिस्क्याउनु हुनेछ। आज काममा घरेलु मद्दत आउने छैन जसले तपाईंका जीवनसाथीलाई तनाउमा पार्न सक्छ।
रमाइलो गर्न बाहिर जानेहरूको लागि सरासर खुशी र आनन्द मिल्नेछ। सम्पत्ति सम्झौता कारोबार हुनेछ र त्यसबाट शानदार लाभ हुनेछ। योग्यहरूका लागि वैवाहिक साँठगाँठ हुनेछ। आफ्नी प्रेमीकाको उट्पट्याङ्ग व्यवहारले तपाईंको मुड उदास बनाउन सक्छ। समस्याको शीघ्रतापूर्ण कार्य गर्ने क्षमताले तपाईंको पहिचान बनाउनेछ। आज आफन्तहरूले तपाईंको वैवाहिक परम आनन्दमा केही हानि पुर्याउन सक्छन्।
स्वास्थ्य सम्बन्धित समस्याहरूले असुविधा गराउन सक्छन्। बचाएको पैसा अचल सम्पत्तिमा निवेश गर्नुपर्छ। अनावश्यक अरूको दोष खोज्ने तपाईको बानीलाई आफन्तहरूले आलोचना गर्नेछन्। यो समयको बर्बादी मात्र हो भन्ने तपाईंले बुझ्नु पर्नेछ। तपाईंले यसबाट केहि पाउनु हुनेछैन। आफ्नो बानी परिवर्तन गर्नु उचित हुनेछ। यो अचम्मको दिनमा तपाईंका सम्बन्धमा भएका ती सबै उजुरी र ईर्ष्या अचानक हराउनेछन्। यो तपाईंका सम्पूर्ण वैवाहिक जीवनको न्यानो दिन रहेको छ।
तपाईंले आज बसेर आराम गर्नु आवश्यक छ – तपाईंलाई सबैभन्दा मन पर्ने सोख र आनन्दका कुराहरूमा संलग्न हुनुहोस्। आनन्दित – ऊर्जावान र मायालु मुडमा तपाईंको हंसमुख प्रकृतिले आफ्ना वरिपरि आनन्द र खुशियाली ल्याउँछ। तपाईंका प्रियले तपाईंलाई खुसी राख्ने कुराहरू गर्नेछन्। आफ्नो जोडीले जब सबै कुराहरू भूलेर तपाईंलाई माया गरेर अँगाल्नेछन्, तब जीवन साँच्चै रोमाञ्चक हुनेछ।
आशावादी भएर उज्यालो पक्षतर्फ हेर्नुहोस्। तपाईंको विश्वस्त आशाले तपाईंको इच्छा र चाहनाको बोधका लागि ढोका खोल्नेछ। विशेष गरेर प्रमुख वित्तीय सम्झौतामा बातचीत गर्दा, हतारमा निर्णय नलिनुहोस्। गृहप्रवेश समारोहको लागि शुभ दिन। तपाईंले आज अन्धो प्रेम प्राप्त गर्न सम्भव भएको पाउनुहुनेछ। महत्त्वपूर्ण मान्छेसँग बातचीत गर्दा तपाईंको शब्दहरू होशियारीसँग चुन्नुहोस्। आज, तपाईं फेरि आफ्नो जोडीसँग प्रेममा पर्नु हुनेछ।
यदि सम्भव छ भने लामो यात्रा गर्नबाट जोगिने प्रयास गर्नुहोस् किनभने तपाईं यात्रा गर्न निकै कमजोर हुनुहुन्छ र यसले तपाईंलाई अझै कमजोर पनि बनाउँछ। सम्पत्ति सम्झौता कारोबार हुनेछ र त्यसबाट शानदार लाभ हुनेछ। तपाईंले प्रेम गर्नेहरूसँगको गलतफहमी समाधान हुनेछ। रोमान्सको रोमाञ्चक दिन – साँझको लागि केहि विशेष योजना बनाउनुहोस् र त्यसलाई सकेसम्म रोमान्टिक बनाउने प्रयास गर्नुहोस्। आज तपाईंको वैवाहिक जीवनमा मज्जा, खुशी र परम आनन्द आउनेछ।
तपाईंले आफ्नो भावना नियन्त्रण गर्नुहोस् र सकेसम्म छिट्टै डरबाट छुटकारा हुनुहोस्, किनकि कार्डमा स्वास्थ्यमा तत्काल प्रभाव पर्ने र राम्रोसँग स्वास्थ्यको आनन्द लिने तपाईंको बाटोमा रहेको अवरोध बढ्ने सम्भावना छ। तपाईंको मनमा दबाब छ भने – आफन्तहरू वा घनिष्ठ मित्रहरूसँग कुरा गर्नुहोस् – यसले तपाईंको टाउकाको भारी कम गर्नेछ। तपाईंका जोडीको स्वास्थ्य नराम्रो हुनाले आज प्रेममा बाधा पर्नेछ। तपाईंको जोडीलाई तपाईंको पुरानो गोप्य कुरा थाहा लाग्नाले केही चोट पर्न सक्छ।
तपाँईलाई थप जानकारी चाहिएमा उप प्रा. लक्ष्मीप्रसाद बराल (फलितज्योतिषाचार्य) ९८४१३५२१६४ सम्पर्क गर्नु होला ।